Kuphi ukufumana uluhlu oluphezulu lwe-PR relinks?
Izizinda ze-Edu zibhekwa njengezona zinamandla kakhulu kwiwebhu. I-backlink ezivela kulezi ziza zinayo igunya elininzi kwaye zixabisa kwimithombo yewebhu edibeneyo.
Edu backlinks ziqhagamshelwano ezivela kwimithombo yewebhu yemfundo ephezulu. I-Google ithatha izikhonkco ezinjengokuthenjwa kunye negunya elininzi kwaye zinikela ngetyala kwi-domain edibeneyo. Ngamanye amazwi, amanqanaba amaninzi e-backlinks ethu angabangela ixabiso elithile kwisiza sakho kunamawaka ekhonkco eliphantsi okanye eliphakathi. Bangakwazi ukwandisa kakhulu iindawo eziphezulu kwaye bakuncede ufike kwi-TOP yekhasi lesiphumo.
Njengoko umthetho we-doma domains ayifumaneki lula kwaye kuphela abo baqinisekisileyo isiseko semfundo bangakha imithombo yabo yewebhu kwimimandla ye-edu. Ukongezelela, isixa esikhulu semfundo ye-edu siye sajikeleza ixesha elide. Imithombo yewebhu ekhoyo kwiwebhu ixesha elide inezonxibelelwano ezininzi ezingenayo kunye nekhasi eliphezulu lePRRR. Yingakho kunengqondo ukudala uluhlu lwe-backlinks list. Ke mna, iGoogle inokwakhokelela kwizizinda ze-edu. Nangona kunjalo, kufuneka usebenze kanzima phantsi komxholo wakho, ukulungiswa kwendawo kunye nodumo lwegama ukuze ufumane i-backlinks edu. Yingakho i-craft yomxholo wesifundo esekelwe kuphando kwaye ikholelwa ukuba kugxininise ekutholeni i-backlink ehloniphekileyo ye-edu yeinjongo zokucwangcisa injini yokunceda inokukunceda uqonde.
Indlela yokufumana uluhlu lwe-backlinks edu
Abanye abaphathi bewebhu bakholelwa ukuba akunakwenzeka ukufumana i-backlinks kwi-freelinks mahhala. Imithintelo emininzi ayivumeli ukuba i-webmasters idale unxibelelwano oludibeneyo kwi-backlinks edu. Kunzima ukuza nomxholo, kuyabuhlungu ukulandela yonke imfuno, kunye nezinye izizathu ezingenangqiqo ezigcina abanikazi bewebhusayithi besuka kwiikhonkco zamatyala e-edu link.
Nangona kunjalo, ngokwenene, konke kulula kakhulu. Ukuba uyayazi into oyenzayo, ukufumana i-backlinks ye-edu kuya kuba nzima. Nangona kunjalo, okokuqala kufuneka ufike ngeendlela zokuqhagamshelanisa ezifanelekileyo kunye nokuzilandela. Makhe sixoxe ngezinye zazo.
Ngenye yezindlela ezilula ukufumana iifayili ukusuka kuyo nayiphina imithombo, kubandakanywa izixhobo zemfundo. Iiwebhusayithi ze-Edu zikhulu kumaphepha olwazi. Oku kunokuba luncedo kubaphathi bewebhu abayazi oko benzayo. Ngokuqinisekileyo kufuneka ube kwiinkcukacha ezithile zokusebenzisa lobu buchule bokwakha. Ngokomzekelo, ukuba ishishini lakho libekwe kwicandelo lokunyameka, ungayisebenzisa. Nika uphando lweGoogle, usebenzisa imibuzo elandelayo: "indawo:. u-Fitness + inurl: izibonelelo, "" indawo:. izidlo ezincinane ze-edu + inurl: izixhumanisi, "njl. Ngokwenza olu phando, uza kufumana uluhlu lwemithombo yewebhu ye-edu. Kufuneka uqhagamshelane naba bantu bewebhusayithi okanye u-admins kwaye ubaxelele ngomthombo wakho wewebhu ochaphazelekayo unomlinganiselo omkhulu wolwazi ngesihloko.
Esi sakhiwo sekhonkco silungile, kodwa kufuneka uqaphele ukuba kude nabo bonke abantu baya kudibanisa nephepha lakho okanye isiqulatho somxholo. Kukho umngcipheko wokuthi ipesenti ezibalulekileyo ze-webmasters zivele zenze isiphakamiso sakho. Nangona kunjalo, kufuneka uwathathe ngokwaneleyo njengoko le ndlela ilula kwaye ayithathi ixesha elide. Yingakho zonke ikhonkco ozilawulayo zokubamba ngolu hlobo kukuphumelela Source .